Dabley hubaysan oo xalay Suuqa Arjantiin ee Degmada Kaaraan ku... | Universal Somali TV
Dabley hubaysan oo xalay Suuqa Arjantiin ee Degmada Kaaraan ku dilay askari Boolis
Kooxo hubaysan ayaa xalay Degmada Kaaraan ee Gobolkan Banaadir waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya, iyaga oo dilkaasi kadib durba goobta ka baxsaday.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in dilka askariga uu ka dhacay Suuqa Arjantiin ee degmada Kaaraan, islamarkaana loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada Booliska Soomaaliya,waxaana xilliga la dilayay uu saarnaa Mooto Bajaaj.
Dilka kadib Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska ayaa tegay halka uu dilka ka dhacay,iyaga oo goobta kasoo qaaday meydka askariga,waxaana sidoo kale ay sameeyeen howlgallo baaritaano ah oo ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyey dilkaas.
Laamaha Amniga Soomaaliya iyo Maamulka degmada Kaaraan ee Gobolkan Banaadir kama hadlin dilka askariga loogu geystay Suuqa Arjantiin, hayeeshee waxaa uu qeyb ka yahay dilalka ka dhaca Magalada muqdisho.
Kan-xigaMadaxweyne Muuse Biixi : Cidii khal k...
Kan-horeCiidamada amniga oo maqaayad ku taal ...
49,088,827 unique visits